Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment मुम्बईमा भएको रेल दुर्घटनामा १५ को मृत्यु - Pnpkhabar.com
मुम्बईमा भएको रेल दुर्घटनामा १५ को मृत्यु
मुम्बई, ३ साउन : भारतको मुम्बईमा रेल दुर्घटनामा परी १५ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरी अधिकारीहरुले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार पैदल यात्रीले बाटो काट्ने वा रेलमा झुण्डिएर यात्रा गर्ने क्रममा रेलबाट झरेर दुर्घटना भएको हो । बिहीबार भएको घटनामा परी अरु कम्तीमा १३ जना घाइते भएको प्रहरी प्रवक्ता एस. आर. गान्धीले बताउनुभयो ।
भारतको आर्थिक राजधानी मानिने मुम्बईमा सजिलोका लागि सबैतिरबाट बाटो काट्ने गरेकाले धेरै दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाई छ । “मुम्बईका अत्यधिक धेरै मान्छे छोटो बाटो प्रयोग गर्न चाहन्छन्,” गान्धीले भन्नुभयो ।
मुम्बईमा दैनिक ७५ लाख यात्रुले रेल सेवा प्रयोग गर्छन् । यो सङ्ख्या अत्यधिक धेरै भएकाले रेलमा धेरै भीड गराउने गरेको छ । मुम्बईको रेल सेवा उपनिवेशकालीन हो ।
रेल सञ्जाल अन्तर्गत हुने दुर्घटनाका कारण भारतमा औसतमा दैनिक दश जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । उनीहरुमध्ये अधिकांशको रेलमा हुने भीडभाड र बाटो पार गर्ने क्रममा मृत्यु हुनेगरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार सन् २०१५ देखि २०१७ सम्ममा भारतमा रेल दुर्घटनामा परी करिव ५० हजार जनाको मृत्यु भएको छ । रासस÷एएफपी
विश्वभर १ करोड ९८ लाख संक्रमित, ब्राजिलमा १ लाखको मृत्यु
भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि स्पेनका पूर्व राजाले छाडे देश